Mabasa Evaapostora 26:1-32
Pauro anotaura pamberi paAgripa (1-11)
Pauro anorondedzera kutendeuka kwaakaita (12-23)
Festo naAgripa vanopindura Pauro (24-32)
26 Agripa+ akati kuna Pauro: “Unobvumirwa kutaura uchizvimiririra.” Pauro akabva atambanudza ruoko rwake, akatanga kutaura nyaya yake achiti: 2 “Ndiri kufara kuti pazvinhu zvese zvandiri kupomerwa nevaJudha,+ nhasi ndakamira pamberi penyu imi Mambo Agripa kuti ndizvipindurire, 3 sezvo imi muchinyatsoziva tsika dzese dzevaJudha nenyaya dzese dzavanonetsana. Saka ndinokumbira kuti munyatsonditeererawo. 4 “Mararamiro andaiita kubvira ndichiri mudiki, pakati pevanhu vekwangu* uye muJerusarema, anonyatsozivikanwa nevaJudha vese+ 5 vaizivana neni, kana vachida havo kupupurira kuti ndairarama semuFarisi,+ boka risingatombotsaudziri pamanamatiro edu.+ 6 Asi iye zvino ndakamira pamberi pedare ndichitongerwa tariro yezvakavimbiswa madzitateguru edu naMwari;+ 7 iyi ndiyo vimbiso iri kutarisirwa nemadzinza edu 12 kuti izadziswe, paari kushingaira kuita basa dzvene siku nesikati. Tariro iyoyi ndiyo yandiri kupirwa mhosva nevaJudha,+ Mambo wangu. 8 “Nei musingabvumi kuti Mwari anokwanisa kumutsa vakafa? 9 Ini ndini munhu aifunga kuti ndaitofanira kuita zvinhu zvakawanda ndichirwisana nezita raJesu wekuNazareta. 10 Izvi ndizvo chaizvo zvandakaita muJerusarema, uye ndakapfigira vatsvene vakawanda mumajeri,+ nekuti ndakanga ndapiwa simba racho nevatungamiriri vevapristi;+ uye pavaida kuurayiwa, ndaibvumirana nazvo. 11 Ndaivaranga kakawanda mumasinagogi ese ndichiedza kuvamanikidza kuti varambe zvavanotenda; uye sezvo ndakanga ndakavatsamwira kwazvo, ndakatosvika pakuvatambudza kunyange mune mamwe maguta. 12 “Pandaiita izvi ndichienda kuDhamasiko ndapiwa mvumo uye ndatumwa nevatungamiriri vevapristi, 13 ava masikati, Mambo wangu, ndakaona chiedza chaibva kudenga ndiri mumugwagwa, chichipenya kupfuura zuva, chikatipoteredza, ini nevamwe vandaifamba navo.+ 14 Tese patakanga tawira pasi, ndakanzwa inzwi richiti kwandiri muchiHebheru: ‘Sauro, Sauro, uri kunditambudzireiko? Kuramba uchikava zvibayiso* kunoita kuti zvikuomere.’ 15 Ndakabva ndati: ‘Ndimi ani, Ishe?’ Ishe akati: ‘Ndini Jesu, wauri kutambudza. 16 Asi simuka umire. Ndazviratidza kwauri nekuti ndakusarudza kuti uve mushumiri uye chapupu chezvinhu zvawaona nezvinhu zvandichaita kuti uone pamusoro pangu.+ 17 Uye ndichakununura pavanhu ava nepamarudzi andiri kukutuma kwaari+ 18 kuti usvinudze maziso avo,+ uvatendeutse kubva murima+ uchivaendesa kuchiedza+ uye kubva pasimba raSatani+ uchivaendesa kuna Mwari, kuti varegererwe zvivi zvavo+ uye vawane nhaka pakati pevaya vakatsveneswa nekutenda kwavo mandiri.’ 19 “Saka Mambo Agripa, handina kurega kuteerera chiratidzo ichi chekudenga, 20 asi ndakatangira kune vaya vari muDhamasiko,+ ndikazoenda kune vaya vari muJerusarema,+ nenharaunda yese yeJudhiya, uye kumamwe marudzi, ndichivaendesera mashoko ekuti vaifanira kupfidza zvivi zvazvo votendeukira kuna Mwari nekuita mabasa anoratidza kupfidza zvivi.+ 21 Izvi ndizvo zvakaita kuti vaJudha vandibate mutemberi uye vaedze kundiuraya.+ 22 Asi nekuti ndakabatsirwa naMwari, nanhasi ndichiri kupupurira vakuru nevadiki, pasina chimwe chandinozivisa kunze kwezvakanyorwa muVaprofita nezvakanyorwa naMozisi kuti zvaizoitika,+ 23 zvekuti Kristu aizotambura+ ova wekutanga kumutswa kuvakafa,+ achizozivisa chiedza kuvanhu ava nekumamwe marudzi.”+ 24 Pauro paakanga achiri pakati pekutaura zvinhu izvi achizvimiririra, Festo akashevedzera kuti: “Wava kupenga Pauro! Kunyanya kudzidza kwava kukupengesa!” 25 Asi Pauro akati: “Handisi kupenga, Changamire Vanoremekedzwa Festo. Ndiri kutaura mashoko echokwadi uye ane musoro. 26 Kutaura chokwadi mambo wandiri kutaura naye ndakasununguka kudai anonyatsoziva zvinhu izvi; ndinonyatsotenda kuti hapana kana chaasingazivi pazvinhu izvi, nekuti hapana kana chimwe chete chazvo chakaitwa pachivande.+ 27 Mambo Agripa, munotenda zvakanyorwa muVaprofita here? Ndinoziva kuti munotenda.” 28 Asi Agripa akati kuna Pauro: “Unenge uchatondinyengetedza kuva muKristu nenguva pfupi pfupi iwe.” 29 Pauro akati: “Ndinonyengetera kuna Mwari kuti kunyange zvikaitika munguva pfupi kana kuti yakareba, musangova imi chete, asiwo vamwe vese vari kundinzwa nhasi, mese mufanane neni, asi musina zvisungo izvi.” 30 Mambo akabva asimuka uye gavhuna naBhenisi nevarume vakanga vagere navo vakasimukawo. 31 Asi pavakanga vava kuenda, vakataurirana vachiti: “Murume uyu haana chaari kuita chakakodzera rufu kana kusungwa.”+ 32 Agripa akabva ati kuna Festo: “Dai murume uyu asina kukwidza nyaya yake kuna Kesari angadai asunungurwa.”+
^ Kana kuti “perudzi rwangu.”
^ Chibayiso chinhu chakapinza chaishandiswa kuita kuti mhuka isiri kuda kufamba ifambe.